April 2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
၅ ထဲကနေ ၂ ကိုနုတ်တာ ဘယ်လောက်ရလည်း ဂျပန်ဟာသ ခွီးနေရတယ် :P :P
Dominic Purcell at 5:40:00 PM 0
တံခါးတစ်ပေါက် နဲ့ တိုင်ပတ်နေတယ်။ ရယ်နေရတဲ့ ဂျပန်ဟာသတို။ �� ဘဝအမောပြေကြပါေ...
Dominic Purcell at 9:54:00 AM 0
ကလေးရယ် အသည်းကွဲနေပါတယ်ဆို ဆေးကြီးကြီး ထိုးလိုက်သေးတယ်
Dominic Purcell at 9:45:00 AM 0
Dominic Purcell at 7:47:00 PM 0
Dominic Purcell at 1:22:00 PM 0
Dominic Purcell at 1:00:00 PM 0
Christ Leo at 4:30:00 PM 0
Christ Leo at 3:17:00 PM 0
Dominic Purcell at 10:57:00 AM 0
Dominic Purcell at 8:06:00 PM 0
အသေ ခွီးရတဲ့ ထိုင်း အချစ်ဟာသ ဇတ်ကား ဘယ်အချိန် ကြည့် ကြည့် ခွီးနေရတယ်
Dominic Purcell at 7:45:00 PM 0
မို့မို့ မျက်စိမှိတ်ချစ်နေမယ် Moh Moh Myat Si Mhate Chit Nay Mae Album
Dominic Purcell at 10:59:00 AM 0
ဆူခိုထိုင်းအသင်းနှင့် ပွဲစဉ်တွင် အနိုင်ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ အောင်သူ
Dominic Purcell at 9:32:00 AM 0
Dominic Purcell at 9:30:00 AM 0
Christ Leo at 4:49:00 PM 0
Christ Leo at 4:12:00 PM 0
Christ Leo at 4:09:00 PM 0
Dominic Purcell at 2:45:00 PM 0
Dominic Purcell at 12:52:00 PM 0
အကယ်ဒမီ ဦးကျော်သူ ရဲ့ ပရော်ဖက်ဆာဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ( 2017 version ) စဆုံး
Dominic Purcell at 10:29:00 AM 0
Dominic Purcell at 9:28:00 AM 0
Dominic Purcell at 6:57:00 AM 0
Dominic Purcell at 4:19:00 PM 0
Dominic Purcell at 4:18:00 PM 0
Dominic Purcell at 4:17:00 PM 0
Dominic Purcell at 4:16:00 PM 0
Dominic Purcell at 3:18:00 PM 0
ရုပ်ထွက်အနေအထားလေး သိရအောင်ScreenShot လေးတွေပါ
Pcloud ကနေ HDCAM 720P ကို ဖိုင်ဆိုဒ် 520 MB နဲ့
HDCAM 720P ကို file size 520 MB နဲ့တင်ပေးထားပါတယ်။
Cast :Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone
Extreme athlete turned government operative
Maung Pauk at 11:47:00 PM 0
Maung Pauk at 3:20:00 PM 0
Ashampoo Music Studio 2018 Pro ( 1 Year License Free Giveaway)
Maung Pauk at 11:05:00 PM 0
Audio Music Editor တွေသုံးတဲ့ Ashampoo Music Studio ဟာ Recording လုပ်ခြင်း၊ Modify လုပ်ခြင်း၊ Organize လုပ်ခြင်း နဲ့ Video ကနေ Audio အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်..
Audio Format အမျိုးမျိုးကိုလည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
အသုံးပြုသူရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအလိုက် Audio ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ဖန်တီမှုတွေကို အဆင့်မြင့်မြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ.. audio encoding and decoding တွေကိုလည်း အရည်အသွေးမြင့်မြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ Audio Music တွေကို DvD ဆီ တိုက်ရိုက် Rip & Burn နိုင်ပါမယ်.. လိုင်စင်နဲ့ ဝယ်သုံးမယ်ဆိုရင် ၁ နှစ်စာကို 29.99 ဒေါ်လာကျသင့်ပါမယ်.. ခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ၁ နှစ်စာ လိုင်စင်ကီးကို တရားဝင်
email ဖြည့်ပြီး Request Full Version Key ကိုနှိပ်ပါ..
ကိုယ့်ဖြည့်ခဲ့တဲ့ email ထဲမှာ Ashampoo က email ရောက်နေပါမယ်.. အဲဒီထဲက လင့်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..
Basic Profile မှာ အချက်အလက်ဖြည့်ပြီး Done.Continue ကိုနှိပ်ပါ..
https://www.ashampoo.com/en/usd/dld/1330/music-studio-2018/ လင့်မှာ Ashampoo Music Studio 2018 Software ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ.. ရလာတဲ့ ကီးကိုဖြည့်ပေးလိုက်ပါ...
Ashampoo Music Studio 2018 Pro ကို ၁ နှစ်စာ တရားဝင်လိုင်စင်ကီးနဲ့ အလကားသုံးနိုင်ပါပြီ..
Audio Music Editor တှသေုံးတဲ့ Ashampoo Music Studio ဟာ Recording လုပျခွငျး၊ Modify လုပျခွငျး၊ Organize လုပျခွငျး နဲ့ Video ကနေ Audio အဖွဈပွောငျးလဲခွငျးတှကေို ပွုလုပျနိုငျပါတယျ..
Audio Format အမြိုးမြိုးကိုလညျး Convert လုပျပေးနိုငျပါတယျ..
အသုံးပွုသူရဲ့ အတှအေ့ကွုံနဲ့ ဖနျတီးနိုငျစှမျးအလိုကျ Audio ပိုငျးဆိုငျရာ ပွုပွငျဖနျတီမှုတှကေို အဆငျ့မွငျ့မွငျ့ လုပျဆောငျနိုငျမှာပါ.. audio encoding and decoding တှကေိုလညျး အရညျအသှေးမွငျ့မွငျ့ လုပျဆောငျနိုငျပွီး ကိုယျဖနျတီးထားတဲ့ Audio Music တှကေို DvD ဆီ တိုကျရိုကျ Rip & Burn နိုငျပါမယျ.. လိုငျစငျနဲ့ ဝယျသုံးမယျဆိုရငျ ၁ နှဈစာကို 29.99 ဒျေါလာကသြငျ့ပါမယျ.. ခုရကျပိုငျးမှာတော့ ၁ နှဈစာ လိုငျစငျကီးကို တရားဝငျ Free ပေးနပေါတယျ...
email ဖွညျ့ပွီး Request Full Version Key ကိုနှိပျပါ..
ကိုယျ့ဖွညျ့ခဲ့တဲ့ email ထဲမှာ Ashampoo က email ရောကျနပေါမယျ.. အဲဒီထဲက လငျ့ကိုနှိပျလိုကျပါ..
Basic Profile မှာ အခကျြအလကျဖွညျ့ပွီး Done.Continue ကိုနှိပျပါ..
https://www.ashampoo.com/en/usd/dld/1330/music-studio-2018/ လငျ့မှာ Ashampoo Music Studio 2018 Software ကို Download လုပျပွီး Install လုပျပါ.. ရလာတဲ့ ကီးကိုဖွညျ့ပေးလိုကျပါ...
Ashampoo Music Studio 2018 Pro ကို ၁ နှဈစာ တရားဝငျလိုငျစငျကီးနဲ့ အလကားသုံးနိုငျပါပွီ..